Ampahafantaro aloha ny ankizy ny bokin'ny ankizy
Ny boky mamaky boky manaitaitra ny ankizy dia tokony hanintona sy hanome aingam-panahy ny ankizy. Avy eo dia hisokatra irery amin'ny tontolon'ny boky izy ireo. Zava-dehibe ny fampifanarahana ny boky ho an'ny ankizy amin'ny taona sy ny fahazoan'ny zaza.
Ny boky tsy takatra dia hametraka haingana ilay zaza, diso fanantenana ary hitodika any amin'ny lalao hafa. Ny ray aman-dreny dia afaka manohana ny famakiana ny bokiny voalohany amin'ny alàlan'ny famakiana sy famakiana mafy. Amin'izany fomba izany dia afaka mifamaky amin'ny boky ny ray aman-dreny sy ny zanaka.
Ireo vao manomboka dia afaka mianatra ny fanononana, ny intonation ary mametraka fanontaniana. Ny boky famakiana voalohany dia tokony hanana sary betsaka araka izay azo atao, izay manazava ny fahazoana ny zavatra novakiana ary koa manentana ny saina.
Ny boky famakiana voalohany dia tokony ho marobe manokana. Ny boky koa dia mandray anjara amin'ny fahatakarana ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana ny tombontsoany manokana. Ka raha misy zaza manitsaka ny lalamby dia tsy ny boky rehetra no tokony ho momba ny lalamby.
Boky sy fitondran-tena ho an'ny ankizy
Ny boky tsara ho an'ny ankizy dia mandray anjara amin'ny fitondran-tena ara-tsosialin'ny ankizy. Manomboka amin'ny famakiana boky izany ary mitohy amin'ny atiny tsara amin'ny famakiana boky ho an'ny ankizy. Ao amin'ny boky ho an'ny mpamaky voalohany dia matetika no faritana amin'ny fampiasana biby ny fihetsika.
Taty aoriana dia misy ny traikefa nahafinaritra sy ny zava-nitranga niainan'ny maherifo amin'ny boky, ary tokony hoporofoin'izy ireo ao amin'ny fiarahamonina. Bokin'ny ankizy maro no azo antoka fa misy zavatra mifanditra, toy ny fifanolanana eo amin'ny ankizy an-tsekoly na amin'ny olon-dehibe, ary mampiseho ny fahafaha-miatrika amin'izy ireo amin'ny fomba fitantarana mahaliana. Mandritra izany fotoana izany dia tsy tokony hampiavaka ny "rantsan-tondro ambony" ny bokin'ny ankizy. Ireo boky dia tsy maintsy mitondra fientanam-po sy fahafinaretana foana ho an'ny ankizy mba hahatonga azy ireo ho tena bookworm.
Raha te hividy boky tsara ho an'ny ankizy ianao dia tokony hifampiraharaha fatratra amin'ny atiny sy ny sokajin-taona voafaritra fa tsy hividy zavatra haingana avy any Amazon fotsiny.
Quiz amin'ny toeram-pambolena ho an'ny ankizy
Tantara fohy ho an'ny ankizy - andro voalohany am-pianarana
Tantara fohy ho an'ny ankizy - fialan-tsasatra voalohany
Tantara fohy ho an'ny ankizy - biby fiompy tsy ampoizina
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 16. Novambra 2020 16. Novambra 2020 Sokajy fampianarana, freetime sy fanatanjahan-tenaKeywords Mpamaky voalohany, ankizy, Boky ho an'ny ankizy, Boky ho an'ny ankizy, Mpamaky novice, lesen, Fahaizana fiteny, Boky famakiana, vorlesen
indray Lahatsoratra taloha: Noely sy Corona
more Lahatsoratra manaraka: Inona no vitamina ilaintsika amin'ny ririnina